Global Voices teny Malagasy » Angola: “Alambamento” Sy Ireo Fombafomba Fampakarambady · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2018 15:44 GMT 1	 · Mpanoratra Clara Onofre Nandika (en) i Janet Gunter, Abdoulaye Bah, Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Angola, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Misy fombandrazana iray somary henjana manodidina ny fangataham-bady ao Angola, antsoina hoe “alambamento“. Heverina mihitsy ho manan-danja be noho ny fanambadiana sivily na ara-pivavahana (kristianina no resahina), ny alambamento dia ahitana andiana fombafomba, sahala amin'ny fanomezana taratasy iray misy fangatahana fanambadiana, matetika ahitana vola ao anatiny.
Mpanambady, sary an'ny blaogy Teto de Estrelas
Mampiseho ny famaritana antsipirihany an'io tranga io ny blaogy Muxima N´gola  [amin'ny teny paortiogey, sahala amin'ireo rohy rehetra]:
Rehefa manapa-kevitra ny hivady ny olona roa, tsy maintsy maka ny fankatoavan'ny fianakavian-drazavavy ary azo tanterahina io raha, mandritra ny fankalazana ny fangatahana fanambadiana, samy manome ny fanekeny avokoa ny tsirairay. Izy roa kely no mametra ny andron'ny fangatahana. Ny fanekena an'io daty io dia omen'ny nenitoa sy dadatoan-drazazavavy, satria mila voriana avokoa ny fianakaviana rehetra ary aterina any amin-drazazalahy ireo lisitry ny fitaovana, izay tsy maintsy atolony mialoha ny andron'ny fangatahana.
Hita ao any lisitra ireo karazan-tsakafo fihinana, mety miovaova ireo arakaraka ny fianakaviana voakasika amin'izany, tahaka izay hazavain'ny blaogy ihany:
Rehefa voatondro ny daty hanolorana ny fangatahana, mandeha mitady an'ireo fananana rehetra ilay zazalahy mba tsy hisy banga izany amin'ny andro voatondro. Ka inona àry no ao anatin'io lisitra io? Misy valopy iray aloha ahitana vola. 300, 400, 500 dolara arakaraka ireo fangatahan'ny dadatoany. Ireo kesika feno labiera mifanongoa mitovy halava amin'ilay tovovavy, ireo kesika feno Coca-Cola na ranom-boankazo mifanongoa mitovy halava amin'ilay tovovavy, osilahy iray, fitafy mihaja ho an'ny dadatoa ary kiraro maromaro ho an'i neny.
Manoritsoritra ny alambamento ihany koa ny blaogy Tre Angolando  amin'ny fanipihana ny maha-zava-dehibe ny lisitra omena ny tovolahy:
Lisitra narafitr'ireo dadatoa izy io, izay ahitana ao anatiny an'ireo fanànana tsy maintsy vidian'ilay tovolahy omena ny fianakavian'ilay zazavavy, mba ho tambin'ny lany rehetra nandritra ny andro nahaterahany ka hatramin'ny andro hanambadiany. Amin'ny ankapobeny, fanomezana izy io izay mampiseho ny tena lanja maha-izy azy satria arakaraka ny mampatanjaka ny lany, no maha-goavana ny voninahitr'ilay tovovavy.
Ireo fanomezana mivaingana, sary an'ny blaogy Teto de Estrelas
Raha toa ka bevohoka ilay tovovavy, mitombo betsaka kokoa ny lanjan'ireo zavatra voalaza eo ambany ireo, araka ny voalazan'ny blaogy Tre Angolando :
Mety ho ambonimbony kokoa io lanja io, raha toa ilay tovolahy ka “nitsambikina avy teny am-baravarankely”. Ny “fitsimbikinana avy eny am-baravarankely” dia midika fa efa bevohoka ilay tovovavy mialoha ny fanambadiana ary izay indrindra no antony mahatonga an'ireo fitakiana hidangadangana kokoa. Amin'ny andro izay anolorana ny fangatahana, manjohy ireo fianakavian-dramatoakely ireo ray amandrenin-drazazalahy, mba hiseho ary dia vita ny fangatahana fanambadiana.
Dia toy izao no fisehon'ny tantara, araka ny voalazan'ny blaogy Muxima N´gola  :
Rehefa tonga ny andro malaza, ny fianakavian-drazazalahy (ny rainy, ny reniny, ny dadatoany, ny nenitoany, ireo rahalahiny sy anabaviny) dia samy mankany an-tranon-dray amandrenin-drazazavavy, ary ny dadatoany, toy ny hoe izy no mpitsara, no manao ireo fampahafantarana ary milaza amin'ny rehetra fa hanomboka ny lanonana fangatahambady. Ampandrosoin'ireo ray amandrenin-drazazavavy ireo ray amandrenin-drazazalahy ary manomboka mamaky ny taratasy fangatahambady izay natolotry razazalahy ilay dadatoa. Rehefa manaiky ny rain-drazazavavy, lasa mitady ny alambamento ilay zazalahy, raha amin'ny fomba filaza hafa, dia ireo fanànana izay tsy maintsy atolony. Voatolotra ny alambamento ary raha toa feno avokoa ireo lisitra dia tondroina ny daty fihaonana mba hifanaraka amin'ny andron'ny fanambadiana sy ireo fikarakarana ara-pitaovana. Rehefa voavaha avokoa ny rehetra, manomboka ireo hira sy ireo dihy (tsy kisendrasendra akory no hahatongavan'ireo labiera sy ny Coca-cola tao anaty lisitra.)
Manomboka amin'io masonandro io, raha mizotra tsara ny rehetra, manjary mpivady izy roa kely. Mandritra ny fety fankalazana ny fanambadiana, miankanjo an'ireo fitafiana nentin-drazana ireo mpanambady sasany ary ireo sasany kosa misafidy ny akanjo mihaja miaraka amin'ny karavaty, raha toa ireo vehivavy mpanambady miakanjo fotsy nentin-drazana. Mitantara i Débora Cecília, mpanoratra ny blaogy Teto de Estrelas  [Tafo Manjelatra] fa nandray anjara tamina fanambadiana iray izay nanasàna azy tany Cabinda, any avaratry ny firenena.
Ny andron'ny fampakarana, miakanjo ny akanjo nentin-drazana ao amin'ny firenena ilay tovovavy ary ilay tovolahy kosa miankanjo mihaja sy manao karavaty. Mialoha ny hanombohan'ny fety, mipoitra ilay tovovavy, misarona lamba, mba ahitana raha toa tena fantatr'ilay tovolahy tokoa izy.
Ireo mpandihy nentin-drazana mandritra ny fety fampakarana, sary an'ny blaogy Teto de Estrelas
Rehefa vita ofisialy ny fankalazana ny fikambanana, dia manomboka ny fety, raha tsy izany, tsy dia olona mpifety tafahoatra ireo vahoaka ao Angola. Betsaka ireo sakafo sy zava-pisotro aroso ho an'ireo nasaina, miaraka amina mozika angoley tsara hatrany.
Tsy mitovy amin'izay naha-izy azy taloha ny fomba ; na dia mbola miorim-paka ao anaty kolontsaina angoley aza ny alambamento, raha ny marina, tsy dia ampiasaina loatra intsony izy io amin'ny fiainana moderina, ary tsy ao Angola irery ihany. Miresaka ny alambamento ao Mozambika i Sandra Flosi eo amin'ny blaogy Mosanblog , izay fianakaviana sasantsasany no efa niala tamin'io fomba io, raha toa ireo hafa, mbola tena mitahiry azy tsara, manao azy ho tsy maintsy hajaina. Mandritra izany fotoana izany, manaiky ny maha-zava-dehibe ny alambamento ny fiarahamonina angoley ary mampiasa dokambarotra amin'ny fahitalavitra  mihitsy aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/06/124099/
 dokambarotra amin'ny fahitalavitra: http://www.youtube.com/watch?v=vBtlnXAPdZM